သီးစုံအချဉ်ရည် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
မုန်ညှင်းစိမ်း.......... ၁ စည်း
ပဲတောင့်ရှည်......... ၁၀ တောင့်
ရုံးပတီသီး............ ၅ တောင့်
ကြက်သွန်နီ...........၁ လုံး ( ပါးပါးလှီး)
ငါးငံပြာရည်........... ၃- ၄ ဇွန်းခန်.
သကြား................၁ ဇွန်း ( ထမင်းစား)
ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်း ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကိုအောက်ဆုံးကထည့်ပြီး ငါးခေါင်း(သို.) ငါးအသားထည့်ကာ...နနွင်းမှုန်.ပါသည်ဆိုရုံလေးနဲ.အရသာအားလုံးဖြည့်စွက်ပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်းလည်းထည့်ပြီး..အဖုံး ဖုံးကာ မီးအေးအေး
မှာစတင်အပူပေးပါ..။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနှူး အိလောက်ပြီဆိုမှ..တစ်ချက်
မီးအေးအေးမှာတစ်ပွက်ဆူပုံစံဖြင့် ဟင်းရည်ကျအောင်ချက်ပေးပါမှ..သီးစုံအချဉ်ဟင်းက စားလို.မြိန်စေပါတယ်။
နောက်ဆုံး..နံနံပင် (သို.) ရှမ်းနံနံလေးများဖြည့်စွက်လိုက်ရင်..ပြီးပြည့်စုံပါပြီ။